Dadkii ka dambeeyay dilkii Mas’uulkii ka tirsanaa Jaamacada SIMAD iyo gaadiidkii lagu fuliyay oo la qabtay * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dadkii ka dambeeyay dilkii Mas’uulkii ka tirsanaa Jaamacada SIMAD iyo gaadiidkii lagu fuliyay oo la qabtay
By MAREEG	 Last updated Dec 13, 2014
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Maxamed Yuusuf Cusmaan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah dadkii ka dambeeyay dilkii maalin ka hor magaalada Muqdisho loogu geystay Mas’uul ka tirsanaa Jaamacada SIMAD.
Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in gaariga lagu dilay Mas’uulkaas uu ahaa mid laga soo kireystay shirkadaha Baabuurta kireeya, isagoo ka digay in shirkadaha iyo milkiilayaasha in gaadiid ka kireeyaan dadka falalka amni daro ku lug leh.
“Kuwii ka dambeeyay oo dilay mas’uul ka tirsanaa Jaamacada SIMAD qaarkood ayaa la qabtay waxaa noo xaqiiqowday baabuurta ay wax ku dileen inay ka soo kireysteen meelaha baabuurta lagu kireeyo, waxaa rabnaa inaan u sheegno shirkadaha baabuurta kireeya in ay iska ilaaliyaan oo aanay ka kireyn dadkan oo kale”ayuu yiri Maxamed Yuusuf.
Waxaa uu sheegay in gaarigaas ay gacanta ku hayaan, isla markaana ay soconayaan howl galo lagu sugayo ammaanka magaalada, isagoo tilmaamay inay ku raad-joogaan kooxaha ku fila dilalka gaadiidka.
Hey’addaha Ammaanka ayaa dhowaan sheegay inay bur buriyeen shabakado isku xirnaa oo gaadiidka ku fulin jiray dilalka, iyadoo la soo bandhigay Sarkaal la sheegay inuu ahaa ninkii u qaabilsanaa Al-Shabaab howl galada gaadiidka lagu fuliyay.
Xildhibaan caan ah oo xabsi la dhigay !
Dhuusamareeb iyo Guriceel oo u kala dhacay ciidamada dowladda iyo Ahlusuna kadib dagaal dhacay
DFS oo amartay in la xiro goobaha Waxbarashada iyo meelo…
Duqeymo lagu diley Amiiro iyo Dad shacab ah oo ka dhacay…
Madaxweyne Farmaajo oo War kasoo saaray geeridii Xildhibaan…
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Somalia oo Goor dhow…
Mareykanka oo farriin Deg-deg u diray Madaxda DF iyo…
Musharaxiinta Mucaaradka oo Maanta halis ah ku Eedeyay MW…
Kenya oo loo diray Digniin Culus oo la xiriirta weerarada…
Tirada duqeymaha Maamulkii Trump ka geystay Somalia oo la…
Wariye Caan ah oo la khaarijiyay iyo Madaxweyne Deni oo si…
Muwaadin Soomaali ah oo toogasho lagu dilay iyo faah faahin…
Farmaajo oo mar kale Shir Deg-deg ah isugu yeeray Madaxda…
Rooble iyo Musharaxiinta oo Guddi u saaray baarista…
Xukuumadda oo Guddi u magacaawday Banaanbaxa Midowga…